Wasiir Cabdi Waayeel oo ka horyimid xil ka qaadista lagu sameeyay | Dhacdo
Wasiir Cabdi Waayeel oo ka horyimid xil ka qaadista lagu sameeyay
Wasiirka Arrimaha Gudaha & Dib-u-heshiisiinta Galmudug, Cabdi Maxamed Jaamac (Cabdi Waayeel) ayaa si adag uga horyimid xil ka qaadistii uu gelinkii dambe ee maanta ku sameeyay Madaxweyne Kuxigeenka Galmudug, Cali Daahir Ciid.
Madaxweyne Kuxigeenka ayaa wareegto uu soo saaray xilka uga qaaday Wasiirka, isagoona xil ka qaadistiisa ku macneeyay mid ku timid xil gudasho la’aan.
Wasiirka ayaa sharci-darro ku tilmaamay tallaabada uu xilka kaga xayuubiyay Madaxweyne Kuxigeenka, waxaana uu sheegay inaanu Madaxweyne Kuxigeenka awood u lahayn inuu xilka ka xayuubiyo, ha yeeshee uu leeyahay inuu shaqo joojin ku samayn karo oo keliya.
Isagoo la hadlayay Warbaahinta gudaha ayuu beeniyay eedda loo cuskaday xil ka qaadistiisa, isla-markaana aanu ka gaabin waajibaadkii loo igmaday.
Warbaahinta ayaa fahamsan in xil ka qaadista Wasiirka ay daaran tahay doodda ka dhalatay soo xulista Golaha Deegaanka Balanballe.
Wasiir Waayeel oo taasi ka jawaabayayna waxa uu sheegay in Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay ku shaqo leedahay Dhismaha Golaha Deegaanka Balanballe, isla-markaana aanay jirin wax caqabad ah oo ka taagan soo xulista xubnahaasi.
Cabdi Maxamed Jaamac (Cabdi Waayeel), Wasiirka Arrimaha Gudaha & Dib-u-heshiisiinta Galmudug ayaa xusay inay jiraan beelo cabasho aan sal iyo raad toona lahayn ka keenay wadada loo maray soo xulista Golaha Deegaanka Balanballe, isagoo intaa ku daray in sifo sharci ahi ay u mareen Dhismaha Golaha Deegaanka Balanballe, sida uu yiri.
Waayeel ayaa ka mid ah Golaha Wasiirada Galmudug, kuwooda ugu saamaynta badan.
Taliyihii Danab ee Galmudug oo lagu dilay dagaalkii galabta ee Guriceel
Taliyihii Ururka 6aad, Guutada 16aad ee Kumaandooska Danab ee Qaybta Galmudug, Gaashaanle Cabdiladiif Axmed Culusow (Feyfle) ayaa lagu dilay dagaal qaraar, oo...
Lafta-gareen iyo Swan oo ka wada hadlay heshiisiinta Madaxda Dowladda
Wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Guriceel
Rooble oo la kulmay Safiirka Sacuudiga ee dalka Kenya
Dagaalka ka socdo Guriceel oo gudaha magaalada leesla soo galay